Metal Zipper, Nylon Zippers, Plastics Zipper, Zippers Long Chain for Sale
MH Zippers dia mampifandray anao indrindra izahay sy izahay. Manana karazam-bolo maro toy ny zipo-nylona isika, marika hodi-janak'ondry, metaly zipera ary andiam-balala an'arivony. Ny fividianana fanao isan-taona dia mihoatra ny $ 10 tapitrisa. Gazety Zipper dia azo alaina amin'ny referanso mpanjifa. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny tranonkala Zipper www.mh-zipper.com.
A: fomba fanao mahazatra ampiasaina hamantarana ny kalitaon'ny zipper
Band: Ny loko ho an'ny tarika dia tokony tsy misy tasy sy maratra aza, Voasohin'ny tanana, mahatsiaro ho mena. Ny tarika dia toy ny onjam-peo eo an-dalam-pandaminana sy eny amin'ny horizontal.
Zanatany: Tokony hihamaivana ny fihinan'ny nify. Rehefa ampiasaina, dia tsy misy tabataba izany.
Takelaka: Tokony hivezivezy malalaka ny fitaovana, ary tsy hivoaka intsony.
Hem: Ny mifanaraka aminy dia tsy ho tapaka na hivoaka. Fifehezan'ny tsindrin-tsindrim-peo sy ny fihazonana ny vondrona Scaparating: Ny Square Bolt dia azo ekena malalaka.
Top Stop: Tsy maintsy miaraka miaraka amin'ny nify voalohany amin'ny zipo-vy sy ny wilon ny top-stop. Saingy ny halavirana dia tsy afaka mihoatra ny lmm ary tokony tokony hiorina tsara sy tsara.
Afindrany farany: Ny tohatra farany dia tsy maintsy miaraka miaraka amin'ny nifiny na mipetraka amin'ny tany ary tokony hiorina tsara sy tsara.
B: Soso-kevitra amin'ny fisafidianana ny kapila
Zipper samihafa mifanaraka amin'ny fepetra samihafa, noho izany, rehefa hividy zippers dia tokony asiana fanamarihana amin'ny mpamokatra ireto zavatra manaraka ireto:
1. Aiza no ampiasain'ny zipo (toy ny fehezany ny kofehiny, ny tongony, ny jirony, ny rainao, ny lay, ny jeans mila hosasana mafy sy ny vokatra vita amin'ny hoditra miaraka amin'ny asidra avo) na fepetra hafa manokana manokana.
2. Ny fepetra takiana amin'ny votoatiny na ny zipera: tsy mila AZO na nikela ary mandalo fanondroana fanjaitra.
C: Fandefasana Tolotran'ny Zipper Lange
Noho ny tsy fetezana vokatry ny haingam-pandeha amin'ny fametrahana ny zipoitra mandritra ny famokarana ny zipera, araka ny sitrapon'izy ireo amin'ny maha-tanteraka ny nify, dia hiseho ny fandeferana azo atao.
Ho ela kokoa ilay zipa dia ny lehibe kokoa ho azo avaozina.
Ny fahadisoana nomen'ny MH zipper Ny fahadisoana nomen'ny orinasa Japoney tao amin'ny NEW Century Fair
Size Famaritana (MG)
Base Spec. fandeferana
Zipper Length (cm) Tolotrasa azo omena
ambany 30 ± 5mm
(Non-separable) Zipper open-end
(Separable) Lalana roa farany niafarana
Zipper (separable) Fomba roa akaiky
Zipper O Tape Fomba roa akaiky
Ny fomba fitetezana zipper
A = Ny halavan'ny lavaka ny zipera
A1 = solaitrabe
A2 = Volondakan-doha
Zipper Closed-end Avy any amin'ny tendron'ny tendrony mankany amin'ny
Zipper open-end Avy any amin'ny tendron'ny tendrony mankany amin'ny
ampahany amin'ny ampahany misokatra.
Lalana Zotra Open Open Zipper Avy any amin'ny tendron'ny tendrony mankany amin'ny
ny tendron'ny faran'ny farany ambany
Zipper miaraka amin'ny Double Slider
(Voaangona eo amin'ny lohan'ny fifandraisana) Avy any amin'ny tendron'ny tendrony mankany amin'ny
tendron'ny tendron'ny tohotra hafa.
(Voafaritra ao amin'ny Bottom-to-
Fifandraisana ambany Avy any amin'ny tendron'ny tendrony mankany amin'ny
hidin'akanjony Home Sokajy --Threads --Zippers - Ripona & Tape --Ropes --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming - Fanampiana fitaovana - Fitaovana & Accessories - Mamboatra machine & Parts --Fabric --Others Momba anay - MH Overview --MH Industrial --MH Tantara --Trade Shows - Our Agents --Image Galleries --Video Album Mifandraisa aminay - Toerana mahomby --Feedback Community --Blog --App --Avia ho namanay